Wholesale chokurukisa huni peeling muchina Mugadziri uye mutengesi | Kusanganisa
Kuremara kwemuchina uyu idanda repakati mushure mekusvuurwa richiri mudiki dhayamita senge 8cm. Kana tichida kushandisa danda iri saka tinofanirwa kuisa kumuchina wekuparura usina kurira kuubvarura kusvika pakatenderera 2.4cm dhayamita.
Isu tinopa imwechete-mira mhinduro dzese, zvinoenderana nemutengi wemusangano saiti mamiriro uye zvinodiwa nevatengi zvezvigadzirwa uye kushandiswa kwezvinhu zvakasvibirira, zvine musoro kupa yakanakisa-inodhura michina.
1.Ihuremu hunorema, Mushini unogona kumhanya usina kudedera, unogona kuve wakanyatsojeka peeling
2. Double hydraulic clamping chucks, chinja chucks otomatiki, zvinowedzera otomatiki uye kuchengetedza basa.
3. Inokodzera kupenya kumeso veneer, inogona kuenderana ne auto centering mudziyo uye yekudyisa conveyor ye otomatiki mutsara.
4.CNC yekudzora system, CNC Kukora Kugadziridza.Automatic Hydraulic Double Chucks system.Inogona kuchinja akasiyana chucks panguva peeling.All mota adotps Nokia Brand, yakanyatsogadzikana uye chaiyo. Inogona kuvimbisa kunyange peeling ukobvu.
Main Parameter e8FT chokurukisa gobvu Core ukanyatsotarisisa peeling Machine
Max slicing dhayamita 2200mm
Slicer ukanyatsotarisisa ukobvu 0.15-2.6mm
Slicer kureba 2800mm-3300mm
Peeling kumhanya 0-80m / min
Yese mota simba 69.6KW
Invertor Taiwan Delta
Ramba huni musimboti dhayamita 110mm
Kunopindirana divi 8000mm * 3500mm * 3200mm
Huremu hwese 11000kg
1. Rotary Clipper ine Servo Motor
Max. kushanda upamhi 2700mm
Kutema ukobvu 0.8-10mm
Izvo magetsi 380V / 415V
Yekumhanyisa kumhanya 0-50m / min
Simba remota 4kw * 2 servo mota
Chigadzirwa chechigadzirwa 9000 * 4000 * 1500mm
2. Vacuum Core ukanyatsotarisisa Stacker
Kuisira upamhi 1300-2600mm
Yakareba urefu 500-1320mm
ukobvu hwekupenya 0.8-10mm
Kuisira kumhanya 90m / min
Bvisa moto 1.5KW * 8PCS
Huremu hwese 3600kgs
Kunopindirana divi 8100 * 3200 * 2750mm
Pashure: makorari sanding muchina
Zvadaro: Vacuum yakaoma